RASMI: Ururka Xirfadlayaasha Ciyaartoyda England Ee PFA Oo Kulan Deg Deg Ah Ku Baaqay Iyo Faah Faahinta Qorshaha Ka Danbeeya. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
RASMI: Ururka Xirfadlayaasha Ciyaartoyda England Ee PFA Oo Kulan Deg Deg Ah Ku Baaqay Iyo Faah Faahinta Qorshaha Ka Danbeeya.
March 25, 2020 at 19:46 RASMI: Ururka Xirfadlayaasha Ciyaartoyda England Ee PFA Oo Kulan Deg Deg Ah Ku Baaqay Iyo Faah Faahinta Qorshaha Ka Danbeeya.2020-03-25T19:46:28+01:00 CAYAARAHA
Ururka xirfadlayaasha kubbada cagta Ingiriiska ee PFA ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay shir deg deg ah oo ay la yeelan doonaan maamulka Premier League iyo English Football League oo maamula horyaalada heerka hoose ee England.
Sababta uu ururka xirfadlayaasha kubbada cagta England ee PFA ugu baaqay shirka deg dega ah ayaa lagu cadeeyay in ay tahay walaac ay ciyaartoyda Premier league ka qabaan mushaar dhimida ay kooxuhu doonayaan in ciyaartoydu sameeyaan.
Saamaynta cudurka coronavirus ayaa keentay in kooxaha Yurub ay shir iskugu yimaadeen maalintii Isniintii iyaga oo ka wada hadlay in si guud loo sameeyo mushaar dhimid ciyaartoyda kubbada cagta ah si ay kooxuhu uga gudbi karaan waqtiga adag ee coronavirus.
Laakiin walaaca ciyaartoyda Premier League ayaa gaadhay ururka xirfadlayaasha kubbada cagta England ee PFA waxayna shaaciyeen in kulan deg deg ahi uu dhex mari doono maamulada Premier league iyo EFL.
War rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ururka xirfadlayaasha kubbada cagta ee PFA ayaa lagu yidhi: “Waxa uu PFA ku baaqayaa kulan deg deg ah oo u dhexayn doona Premier League iyo EFL si looga wada xaajoodo saamaynta qalalaasaha maaliyadeed ee COVID-19 uu ku yeeshay kooxaha iyo ciyaartoyda labadoodaba”.
Kooxaha kubbada cagta ee horyaalada Yurub ayaa doonaya in ciyaartoydu ay hoos u dhigaan mushaarkii heshiisyadooda ku jiray ee ay kooxaha ka soo qaadanayeen maadaama oo ay saamayn dhaqaale oo wayni ku habsatay markii horyaalada la joojiyay.
PFA ayaa matala ciyaartoyda kubbada cagta England waxaana la filayaa in kulanka ay la qaadan doonaan maamulada Premier league iyo EFL ay kagala hadli doonaan mushaar dhimista lala maagan yahay ciyaartoyda horyaalada England.
Saamaynta coronavirus ayaa saamayn dhaqaale iyo nafeedba aduunka ku yeeshay waxayna ilaa hadda kooxaha iyo ciyaartoydu ayna ka heshiin haddii mushaar dhimis la samayn doono ugu yaraan waqtiga fasaxa coronavirus lagu jiro.
Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta iyo xidiga kooxda Arsenal ee Callum Hudson-Odoi ayaa si buuxda uga soo kabsaday coronavirus waxayna abuuraysaa rajo ah in todobaadada soo socda ay kooxaha Premier League bilaabi doonaan in ay tababarka ku soo laabtaan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa waxa ka soo bixi doona kulanka deg dega ah ee uu ururka xirfadlayaasha ciyaartoyda England ee PFA uu ugu baaqay maamulada Premier leauge iyo EFL.
« Turkiga oo 20 qof oo Sacuudiga u dhashay dacwad ugu soo oogay dilkii Jamaal Khaashuqji